Otu esi edozi Python 3 Virtual Environment na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
August 23, 2021 August 23, 2021 by Jọshụa James
Wụnye Python 3.8 (Ubuntu Default) ma ọ bụ Python 3.9
Nhọrọ - python3-dev
Wụnye PIP 3 na Ubuntu 20.04
Mepụta Python 3 Environment na Ubuntu 20.04
Mepụta Mmemme Nnwale (Ndewo Ụwa)
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka esi etinye ya Python 3 na PIP 3 on your Ubuntu 20.04 sistemụ arụmọrụ, yana ịtọlite ​​​​mgbe mmemme site na ahịrị iwu.
Ngwungwu achọrọ: Python 3 na PIP 3
Maka nkuzi na ịmepụta gburugburu Python 3, ị ga-achọ ịwụnye ndabere ndị a na njedebe Ubuntu gị (Ctrl+ALT+T):
Site na ndabara, Python 3.8 na-abịa na ebe nchekwa Ubuntu 20.04. Iji tinye Python 3.9, mee iwu a:
Jiri ụdị jiri kwado nrụnye ma wuo iwu:
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ụdị Python 3.9 ọhụrụ, wụnye PPA ppa: agwọ nwụrụ anwụ/ppa:
Ugbu a, ọ bụrụ na ị nwere Python 3 dị, ị nwere ike kwalite, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-etinye nke ọhụrụ, na-agba ọsọ iwu wụnye:
Iji kwalite dị:
Ozugbo emechara, lelee ihe owuwu ọhụrụ ahụ ma e jiri ya tụnyere nke ebe nchekwa ndabere Ubuntu:
Were ya na ị ga-amasị Python 3.10 ọhụrụ; biko hụ ntuziaka anyị maka ịwụnye Python 3.10 na Ubuntu 20.04. Mara, nke a kwesịrị iji naanị maka ndị mmepe nwere ahụmahụ chọrọ ihe kachasị ọhụrụ dịka 3.10 na ederede ka dị na BETA.
Python-dev bụ ngwugwu nwere faịlụ nkụnye eji isi mee maka Python C API, nke lxml na-eji maka na ọ gụnyere mgbakwunye Python C maka ịrụ ọrụ dị elu. Python-dev nwere ihe niile achọrọ iji chịkọta modul ndọtị Python
Ndị ọrụ Python 3.8:
Ndị ọrụ Python 3.9:
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Python 3, ị ga-achọ ụzọ isi jikwaa ngwugwu ngwanrọ. Ngwá ọrụ dị mma iji bụ Pip nke nwere ike ịwụnye ma jikwaa ngwugwu. Enwere ike ịchọta ntuziaka dị omimi na ịwụnye Pip na Ubuntu 20.04 na Otu esi etinye PIP2 na PIP 3 na Ubuntu 20.04.
Iji wụnye Pip maka Python 3.8, nke na-abịa dị ka ndabara na Ubuntu 20.04, jiri iwu a:
Nyochaa nwụnye Pip site na iji iwu a:
Iji tinye PIP maka Python 3.9 ma ọ bụ karịa, jiri iwu curl a:
Mgbe e gburu ya, nweta-pip.py ga-etinye pip, ntọala ntọala, na wheel na gburugburu Python ugbu a.
Nyochaa nrụnye na Pip maka Python 3.9 ziri ezi:
Ihe mbụ ị ga-achọ ịtọ ntọala python 3 gburugburu bụ ịwụnye ngwugwu ahụ Python3-env.
Iji mee nke a, jiri iwu na-esonụ maka Python 3.8:
Maka ndị ọrụ Python 3.9:
Na-esote, mepụta akwụkwọ ndekọ aha ọhụrụ iji kwado gburugburu Python anyị site na iji iwu mkdir:
Mara, na myproject Enwere ike iji ihe ọ bụla masịrị gị dochie aha ndekọ aha.
N'ime ndekọ aha, mee iwu a ka ịmepụta gburugburu:
Ozugbo n'ime gburugburu ebe ị ka kere, iwu ahụ na-edozi ndekọ ahụ, nke nwere ike iji akwụkwọ ahụ nyochaa ndekọ ahụ ls iwu:
Iji mee ka gburugburu ebe obibi rụọ ọrụ ma ọ bụ, n'okwu dị mfe, banye na gburugburu ebe obibi, jiri iwu a:
Mgbe ịmechara gburugburu gị, ị ga-achọpụta na njikwa iwu gị ga-abụ prefix na aha gburugburu, nke a na-akpọ aha (Myapplication) dịka ọmụmaatụ nkuzi anyị.
Otu ihe atụ nke a bụ n'okpuru:
Iji nwalee ebe mebere gị, ụzọ dị ngwa bụ imepụta mmemme ihe atụ Hello World ama ama. Ime nke a ga-eme ka ihe niile na-arụ ọrụ ma mee ka ị mara na ị na-arụ ọrụ na gburugburu Python.
Na gburugburu gị, mepụta ma mepee edemede Python gị n'ọdịnihu:
Ugbu a mee faịlụ ule Python site na iji iwu a:
Ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-enweta nsonaazụ ndị a:
Mgbe ịmechara na mpaghara my_env, ịpụ pịnye:
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi etinye Python 3. N'ozuzu, Python mebere gburugburu na-enyere aka decouple na ikewapụ Python na ngwugwu pip jikọtara ya, na-enye ndị ọrụ njedebe ohere ịwụnye na jikwaa nchịkọta nke ha onwe ha na-adabere na nke ndị nyere site na ya. usoro. Nke a dị ezigbo mma mgbe ị na-emepụta faịlụ sistemu iche iche.